हेमजाको मिलनचोकमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट - NepalDut NepalDut
पोखरा महानगर पालिका वडा नं. २५ मिलनचोकमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापना गरिएको छ ।
अस्थायी प्रहरी पोष्टको बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले उद्घाटन गरे ।
अस्थायी पोस्टमा प्रहरी सहायक निरीक्षक भूमिप्रसाद पौडेलको कमाण्डमा एक ट्राफिक सहित सात प्रहरी रहने छन् । कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा केन्द्र एवम् सामुदायिक प्रहरी सेवा हेमजाको आयोजनामा नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम समेत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिले हेमजामा हुने विकृति विसंगती न्यूनिकरण गर्नमा स्थापित पोष्टमा खटिएका प्रहरीले यहाँका नागरिकसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यहाँको विकृति विसंगति न्यूनिकरण गर्न प्रहरी सक्रिय भएर लाग्न समेत सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले समाज हुने अपराधिक क्रियाकलापलाई निमिट्यान्न पार्न प्रहरी सधै लागि परेको बताए ।
‘समाजमा हुने विकृति विसंगतिलाई निष्तेज पार्न पनि यहाँ चौकी स्थापना भएको छ’, उनले भने,‘यहाँका नागरिकसँग सहकार्य गरेर विकृति विसंगति हटाउन पोष्टमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छु ।’
पोखरा लेखनाथ महानगर पालिका वडा नं. २५ का वडा अध्यक्ष शोभाकर तिमिल्सिनाले वास्तविक अपराधि समाउनका लागि नागरिकले प्रहरीलाई सघाउनु पर्ने बताए ।
वडा प्रहरी कार्यालय वगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिपक थापाले यस ठाँउको शान्ति सुरक्षा र अपराध न्यूनिकरण गर्नका लागि आफू सधै खटिने विश्वास दिलाए ।
सामुदायिक प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ बास्तोलाले नागरिक र प्रहरीबीच सहकार्यबाट नै शान्ति सुरक्षा मजवुद हुने बताए ।
सामुदायिक सेवा केन्द्र एवम् सामुदायिक प्रहरी सेवा हेमजाकी अध्यक्ष विष्णु बास्तोलाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।